Ceritinib (LDK378) poda - Mugadziri Fekitori Wemutengesi
/ Products / Kenza inorwisa / Ceritinib (LDK378)
Ceritinib Powder inoshandiswa kurapa varwere vane metastatic isiri-diki kenza yemapapu kenza (NSCLC) vane hutano hweaplastic lymphoma kinase (ALK) uye vane mamota ari kufambira mberi kana asingakwanise kutsungirira Crotinib (crizotinib).
Product Name Ceritinib (LDK378) upfu
Ceritinib (LDK378) Podatsananguro
Ceritinib powder inoshandiswa pakurapa varwere vane anaplastic lymphoma tumor-positive (ALK +) metastatic isiri-diki kenza yemapapu kenza (NSCLC) iyo yakawedzera kana isingashivirane necrizotinib mushure mekurapwa ne crizotinib.
Iyo chromosomal rearrangements inosanganisira iyo anaplastic lymphoma kinase (ALK) semutyairi wecocogenic yakanyatso shandura kurapwa kweasina-madiki-maseru kenza yemapapu. Mumakore gumi apfuura, zvinodhaka zvakanangwa zvakabuda seyakarongeka nzira yakasarudzika yeALK-yakagadziriswazve isiri-diki-sero kenza yemapapu. Iko kukurumidza kubvumidzwa kweakasimba ALK inhibitors, senge crizotinib uye ichangoburwa ceritinib (LDK378) poda, zvichibva pachikamu chakanyatsogadzirwa chikamu cheI / II miedzo kwave kubudirira kwakakosha mukutsvagisa kenza yekiriniki uye kunopa nguva nyowani yeoncogenic yakanangwa kurapwa kunozivikanwa yakashongedzwa yekiriniki kuyedza dhizaini. ceritinib powder kuti ive imwe nzira ine simba kune crizotinib yekenza yeAlk-yakagadzirwazve isiri-diki-kenza yemapapu yemapapu inowanikwawo.
Ceritinib (LDK378) upfu Mechanism of Action
Ceritinib powder inosarudza uye ine simba inhibitor yeaplastic lymphoma kinase (ALK). Mune zvakajairwa physiology, ALK inoshanda senhanho yakakosha mukuvandudza uye mashandiro enervous system tishu. Nekudaro, chromosomal translocation uye fusion zvinomutsa imwe oncogenic fomu ye ALK iyo yakave yakabatanidzwa mukufambira mberi kweNSCLC. Ceritinib powder nokudaro inoshanda kudzivirira iyi enzyme yakachinja uye kumisa kuwanda kwesero, pakupedzisira ichimisa kufambira mberi kwekenza. Nekuti ceritinib powder inoonekwa seyakanangana nekenza yekurapa, bvunzo yeDAA-inogamuchirwa inodiwa kuti uone kuti ndevapi varwere vari kukwikwidza ceritinib powder. Iyi bvunzo, yakagadziriswa naRoche, ndiyo VENTANA ALK (D5F3) CDx Assay uye inoshandiswa kuzivisa ALK-positive NSCLC varwere vaizobatsirwa neceritinib powder kurapwa.
Ceritinib (LDK378) Poda kunyoresa
Ceritinib powder is an anaplastic lymphoma kinase (ALK) -positive inhibitor inonyanya kushandiswa pakurapa metastatic NSCLC. kushanda senzira yekutanga yeMastastatic NSCLC.
Ceritinib (LDK378) Poda Side Migumisiro & Yambiro
Migumisiro yakakomba yakakomba inosanganisira gastrointestinal toxicity, hepatotoxicity, interstitial mapapu chirwere, yakareba QT syndrome, hyperglycemia, bradycardia, uye pancreatitis.
Mhedzisiro inowanzo kutaurwa ndeye manyoka, kusvotwa, makemikari eropa akakwidziridzwa, kurutsa, kurwadziwa mudumbu, kuneta, kuderera kwechido, uye kupatira. Nekuda kwenjodzi yemakemikari eropa akakwidziridzwa, bvunzo dzechiropa dzinofanirwa kuitwa vhiki mbiri dzese kwemavhiki mapfumbamwe ekurapa.
Chekupedzisira, ceritinib poda iri mbiri substrate uye ine simba inhibitor yeiyo enzyme CYP3A4, saka mishonga inofanirwa kutariswa zvine hungwaru iyo inogona kusangana ne ceritinib powder.
 “Zykadia (ceritinib powder) Makapisi, ekushandisa Oral. Yakazara Kurondedzera Ruzivo ”(PDF). Novartis Pharmaceuticals Corporation. Yakadzorerwa 14 Kukadzi 2017.
 "Mazita Enyika dzese Asiri ekuzvitengesera eMishonga yeMishonga (INN). Yakakurudzirwa Mazita Asiri Ekuzvimiririra Emarudzi: Rondedzero 71 ”(PDF). Sangano Rinoona nezve Utano Pasi pose. 2014. p. 79. Yakadzorerwa 14 Kukadzi 2017
 "FDA Inobvumira Ceritinib powder yeAlk-Positive Lung Cancer". Medscape. Kubvumbi 29, 2014.
 "Kunyora data" (PDF). www.pharma.us.novartis.com. Yakadzorerwa 2019-06-12.
 "FDA Inowedzera Ceritinib powder Kubvumidzwa kweLung Cancer". National Cancer Institute. 27 Chikumi 2017.